Ny Ubuntu Gaming Experience dia hanatsara ny traikefa gaming Ubuntu | ubunlog
Linux dia mbola tsy sehatra tsara indrindra hilalaovana, ary heveriko fa tsy hisy izany. Miaraka amin'ny ampahany betsaka amin'ny tsena eo am-pelatanan'ny Windows, vitsy no mamoaka zavatra tena mendrika ho an'ny macOS, ary vitsy kokoa ho an'ny Linux. Marina fa misy Steam sy Proton, fa rehefa mitsahatra dia inona no mitsahatra. Na izany aza, misy ny tetikasa hanatsarana ny traikefa amin'ny lalao amin'ny Linux, ary Canonical manao sonia olona izao ho an'ny ekipa iray hantsoin'izy ireo Ubuntu Gaming Experience.
Vao tsy ela akory izay no nivoahan'ny singa Canonical zandriny indrindra gamebuntu, izay tsy inona fa rindrankajy voaomana hametraka izay rehetra ilaina mba hahatonga ny filalaovana ao amin'ny Ubuntu ho tsara kokoa. Nilaza ny Canonical fa hiditra tanteraka izany rehefa nivoaka ny dikan-teny Steam snap, ary nitranga tamin'ny volana lasa izany. Amin'izao fotoana izao dia toa tena hanomboka hiasa izy ireo manatsara ny traikefa amin'ny filalaovana ao amin'ny Ubuntu, ary toa tsy misy ifandraisany amin'ny nataon'ilay tanora Indiana izany. Na angamba eny, angamba nandrisika azy ireo hahazo vahana izany.
Ny Ubuntu Gaming Experience dia hanamora ny filalaovana anaram-boninahitra tsara kokoa amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny pejy izay ilazany anay momba ny tetikasa ekipa Ubuntu Gaming Experience, dia namaky izahay fa:
Ny fanolorana traikefa feno amin'ny lalao dia mihoatra ny fifanarahana; momba ny fampitomboana ny fampandehanana amin'ny fitaovana isan-karazany, ny fiantohana ny anti-cheat dia matanjaka sy azo antoka, manome fahafahana miditra amin'ny fitaovana hamoronana votoaty, fitantanana ny mpamily, ary overlay HUD, ary koa ny fiantohana ny fanaraha-maso ny headset gaming, ny klavier RGB, ary ny totozy lalao. dia mifanaraka tanteraka ary azo zahana.
Milaza koa izy ireo Proton, ampahany manan-danja amin'izany rehetra izany izay manome vokatra tsara toy izany ary mahazo tombony ihany koa ny mpampiasa Steam Deck. Ary tsy fantatsika hoe ahoana no hiafaran'izany rehetra izany, fa ny hieritreritra fotsiny dia hihatsara ny toe-javatra. Atsy ho atsy, ny asan'ity ekipa ity, Steam, sy ny hafa toa an'i Saraswat, izay mitantana ny Gamebuntu, ankoatry ny zavatra hafa, dia hanatsara kokoa ny traikefa amin'ny lalao amin'ny Linux.
Mazava ho azy, na toa ahy, mampiasa rindrambaiko fa ny tena ataony dia izany Ny lalao Windows dia mifanaraka amin'ny Linux Tsy afaka mametraka antsika eo ambonin'ny rafitra Microsoft amin'ireo asa ireo, fa hamela mpampiasa maro hanadino tanteraka ny Windows, farafaharatsiny ireo izay tsy mieritreritra ny hilalao lalao fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Canonical dia maka olona ho an'ny ekipa antsoina hoe "Ubuntu Gaming Experience", izay mikendry ny hanatsara ny traikefa amin'ny lalao amin'ny Ubuntu.
Pablo sanchez dia hoy izy:
Heveriko fa tsara kokoa noho ny an'ny macOS ny toe-draharaha amin'ny Linux amin'ny resaka lalao, na dia noho ny Proton sy Divay aza izany, dia misy lohateny maro mandeha amin'ny GNU/Linux….
Valiny tamin'i Pablo Sanchez
Navoaka ny sata mifanaraka amin'ny Wayland miaraka amin'ireo mpamily Nvidia